I-Nokia 8 elindelweyo inokufika kwintengiso ngoJulayi 31 nge-599 euro | Iindaba zeGajethi
I-Nokia 8 elindelekileyo inokuthi ifike kwintengiso ngoJulayi 31 nge-599 euro
AbakwaNokia bathi thaca kwi-MWC edlulileyo uthotho lweetheminali afuna ukubuyela kuzo, ubuncinci okomzuzwana njengesithunzi, sokuba yayiyintoni inkampani ekupheleni nasekuqaleni konyaka ka-2000. Enye yeetheminali ezizalise Uninzi lwamagama kumanqaku avela kwiibhloko ezahlukeneyo zetekhnoloji, kwiNokia 8, indawo apho iNokia ifuna ukubetha itafile, kungekuphela ngenxa yeempawu zayo, kodwa nangenxa yexabiso layo, ixabiso eliza kuphantse libe zii-euro ezingama-599. Ngokwe-GSMArena, i-terminal entsha izakufika kwintengiso ngoJulayi 31, njengoko uye wakwazi ukufumanisa ngabathengisi abohlukeneyo emantla Yurophu.
Esi siginali sitsha, njengaleyo sele ikwimakethi phantsi kwegama likaNokia, yenziwe yi-HMD Global, enesivumelwano sokusebenzisa uphawu kule minyaka imbalwa izayo. Iiterminal zenziwa yiFoxconn, inkampani iyekile ukuzenza njengoko ibenzile de iMicrosoft yangena endleleni. Ukucaciswa kweNokia N8 okwangoku kwaye ngokwamarhe apapashiweyo kwiiveki ezidlulileyo kungalandela oku:
Iprosesa ye-Snapdragon 835
Ukugcinwa kwe-64GB / i-128GB yokugcina.
4 GB ye-RAM / 6 GB ye-RAM
Isikrini esingange-intshi ezi-5,3 esinesisombululo esingama-2.560 x 1.440
Ikhamera engasemva eyi-13 mpx kunye nekhamera engaphambili eyi-8 mpx
I-Android 7 njengenkqubo yokusebenza.
Asazi ukuba iNokia iyakwenza intshukumo yokuphehlelela iimodeli ezahlukeneyo nge-4 okanye i-6 GB ye-RAM kunye ne-64 okanye i-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi, into ekungafanelekanga ukuba iyenze ukuqala ukwenza abathengi babe nesiyezi. I-PH-1 ebalulekileyo ka-Andy Rubin isinika izibonelelo ezifanayo, ngokweprosesa, i-GPU kunye nememori yangaphakathi, kodwa malunga ne-200 yeerandi ebiza kakhulu kuneNokia, ukuba iqinisekisiwe ekugqibeleni ukuba iNokia 8 entsha iyakufika kwintengiso ye-599 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Nokia 8 elindelekileyo inokuthi ifike kwintengiso ngoJulayi 31 nge-599 euro
Buyisela kwakhona ibhetri yakho xa useluhambeni